Daawada Subutex oo dalka laga joojiyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Mychele Daniau / Scanpix
Daawada Subutex oo dalka laga joojiyey
La daabacay fredag 23 november 2012 kl 10.27
Daawada lagu magacaabo Subutex ee la siiyo dadyoowga isticmaala muqaadaraadka hero'iinta ayaa laga joojiyay dalkan Iswioidhen.
Shirkadda dawooyinka Reckitt Benckiser ayaa wada-tashiyo ay la yeelatay hayadaha dawliga ah dabadeed go'aansatay inay joojiso u soo dhoofinta Subutex ee dalkan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee loo aaneyneyo ayey ka mid yihiin war-binno lagu ogaadey in isticmaalka habka khaldan ee Subutex ka ballaaran yihiin sidii loo maleeynayey.
Claes Nordenson, ahna madaxa laanta dawooyinka ee shirkadda Reckitt Benckiser, ayaa sheegay mar uu u warramayay idaacadda la iska daawado ee Svt sidan:
-Isticmaalka khaldan ee daawadan ayaa aad uga duwan sidii aannu hore u qabney. Waxaa muuqatay in dhallin-yaro badani ku bilaabaan qaadashada muqaadaraadka daawada Subutex. Keliya cabsi middaa laga qabi karo ayaa ku filan in laga joogsado.
Dharbaaxo wayn ayay ku noqotay ururka muqaadaraadleyda isticmaala maan-dooriyeyaasha in Subutex ay suuqa ka baxdo. Isaga oo xubnaha ururku qabaan in aan Subutex daawo u dhiganta ee looga dawoobi karo maandooriyaha aaney jirin. Waa daawo ka duwan dhiggeeda Subuxone.
Halka ay dhanka kale qabaan in aanay daawadani waxba kaga duwaneyn daawooyinka kale ciddii dooneysa iney si khaldan u isticmaasho, middaasina oo ay la qabaan hayadda dawooyinka iyo shirkadda Reckitt Benckisers, sida aannu ka soo xigtanney Svt.
Muqaadaraad ma lagu daweeyn karaa muqaadaraad?
Waayo arag uma ihi